तपाई प्रचण्डको कुमसँग आफ्नो कुम जोड्दै हुनुहुन्छ । साइजमा बराबर होला तर सिद्धान्त र दाउपेच आकाश जमिनमा फरक छ । के अब पनि तपाईंको पछि लागेर कार्यकर्ता तपाईंसँगै सती जान राजी होलान् ?
माधव कमरेड, लाल सलाम भनौं कि, जय नेपाल ! अब अभिवादन भन्न पनि सकिएन । घाइते बाघलाई कुकुरले पनि भुक्छन् भन्छन् । ओरालो लागेको मृग भनेर खेद्न खोजेको नसम्झिनु होला । बाघको मुख खाए पनि रातो नखाए पनि रातो ! बाघले घाँस खाँदैन भन्छन् । टाङ मुनिबाट छिर्दैनन् , पुच्छर लुकाउँदैन भन्छन् । जस्तै पर्दा पनि बाघ बाघ नै हुन्छ । बाघ गर्जिए पछि सबै तर्सिन्छन् । सायद नेताहरू पनि त्यसै हुनुपर्ने हो । आज माधव नेपाल म नेता हुँ नेता भनेर गर्जी रहेको देख्दा मलाई दुई चार प्रश्न सोध्न मन लाग्यो ।
अब त सम्बोधन पनि कसरी गरौँ । तपाई चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे , आफ्नो लागि संविधान लत्याएको मान्छे । भागवण्डामा प्रधानमन्त्री भएर जनमतको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम तपाईँको पाला देखि सुरु भयो । सत्तामा पुगेर मलाई जनताले हराएको होइन भन्नु हुन्छ ! कसले हरायो ? आफू र आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न नसक्नेले सधैँ गुटबन्दी खेमाले चुनाव हरायो भन्नु हुन्छ । यसरी हराउन पाइन्छ भन्नु हुन्छ । पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । के हो पार्टी ? के हो पार्टीको निर्णय ?
म सोध्न चाहान्छु, अहिले तपाई कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ ? कसको निर्णय मान्नु हुन्छ ? यावत प्रश्नहरूको तपाईं सरल उत्तर दिनुहुन्न । अझै म नेता हुँ ! कार्यकर्ता होइन भन्नु हुन्छ । तपाईँका कार्यकर्ता को हुन् ? तपाईँको नेतृत्व के हो ? तपाई प्रचण्डको कुमसँग आफ्नो कुम जोड्दै हुनुहुन्छ । साइजमा बराबर होला तर सिद्धान्त र दाउपेच आकाश जमिनमा फरक छ । याद गर्नु होला तपाईं आफूसँगै कार्यकर्ता र भोटर तपाईँको साथ लागेर खुरुखुरु आउने छन् भनेर सोच्नु भएको होला। के अब पनि तपाईंको पछि लागेर कार्यकर्ता तपाईंसँगै सती जान राजी होलान् ?
हरेक नेपालीहरू बाठो भएका छन् । बुझ्ने भएकाछन् नेताको लागि व्यवस्था र देश बेच्न सकिँदैन । गल्ती गर्नेलाई इतिहासमा कालो टिका लगाई दिनेछ । सुध्रिनु पर्ने मौकामा आफूलाई तराजुको पाटामा तौलिनु हुन्छ । अब म के गरौं ? होली वाइन पिएर ! डलरको प्रलोभनमा साठगाँठ गर्नेले पादरी भएर गौतम बुद्धको उपदेश छाट्न पक्कै सुहाउँदैन । मलाई मान भएन, अपमान भो भन्ने तपाईलाई प्रचण्डले मान्नेछन् ? देउवा तपाईंको साथ पछि लाग्न तयार छन् ? मेरो घर भाँडियो भनेर विपक्षीको शरण पर्न जाँदा तपाईँको उपहास भएको छ ।
तपार्इं आफ्नो हार स्वीकार गर्न चाहनुहुन्न ।अहिले कोरोनाको मारमा देश ,जनता विचलित छन् । तपाईंको कर्कट बोली र त्यो गमक्क अनुहार देख्दा पनि उदेक लाग्ने बनाउँछ । तपार्इं हाताहाती खोज्ने मान्छे हो । चुनाव हारे पछि सरकार होइन पार्टी हाँक्ने हो । कार्यकर्ता नेपाली जनताको मन जित्ने हो । पदमा पुग्नेहरू सत्ता चलाउनेहरू मति भ्रष्ट्र हुन सक्छन् । प्रलोभनमा पर्न सक्छन् । दबाबमा पर्न सक्छन् । उनीहरूलाई हौसला प्रेरणा र होसियारी गर्ने दायित्व तपाईंको होइन र ?
तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउँदा गणेशमान सिंहले जस्तै मलाई चाहिँदैन भनेर त्याग गर्नु भएको भए आज कोही माइकल लालले एमालेलाई माओवादीसँग साँठगाँठ गर्ने थिएन । आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउन मतपत्र च्यात्नेसँग साठगाँठ कदापि गर्ने थिएन । कहाँ गयो पार्टी प्रतिस्पर्धा ! पार्टी बदनाम भएको थियो । आज सतित्व गुमाएको एमालेको हरि बिजोगमा विपक्षी दल पार्टीहरू रमाई रमाई नाची रहेका छन् । तपाईंलाई साथ दिनेहरू माछो आए दुलो हात सर्प आए बाहिर हात गर्छन् । खुसीमा साथ दिनेहरू मर्दा घाटसम्म आउने छैनन् । तपाईंले आफ्नो र पराईको भेउ नै पाउन सक्नु भएन ।
अघि बढ्दा बाटो रोकी , छेक्ने पनि आफ्नै हुन् ।
तिललाई पहाड बनाई , ठोक्ने पनि आफ्नै हुन् ।
को दुष्ट ,को इस्ट, चिन्न पनि ,साह्रै गाह्रो पो भो !
लास बन्दा, आँसु बगाई बोक्ने पनि आफ्नै हुन् ।
राम र रावणको लडाई मा बिभीषणले रामको साथ दियो ! रावण वध पछि रामले बिभीषणलाई मुकुट पहिराई लङ्काको राजा घोषणा गरे ।
आजको राजनीतिक लडाईमा जितको पगरीको हकदार तपाई माधव नेपाललाई मान्ने छन् । सन्की बाबुले घर लथालिङ्ग बनायो । आफ्नो घर छोराछोरी सम्हाल्ने दायित्व तपाईँको पनि होइन र ? यस्तो अवस्थामा आफ्नो घर जलाई पराईको झुपडीमा बाँस माग्न किन गएको ?